Nchịkọta Ọzụzụ Ọgụgụ Isi | Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Home > Ọzụzụ gbasara ọgụgụ isi > Wụpụta Ngwungwu Ọzụzụ Echiche Ahụike Gị
Ime ka anyi mata onye ichoro ikuziri n’enyere anyi aka ime ka ihe ndi anyi choro di ka ihe ha choro ka ha wee muta ihe omumu ha. Anyị nwere ike ịnapụta modulu ndị metụtara ndị ọrụ niile na nzukọ gị, otu ndị ọrụ na ndị njikwa. Anyị na-enyekwa Ọzụzụ Mental Health First Aid maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ ahụ n'ime nzukọ ha.
Biko mezue usoro dị n'okpuru iji zitere anyị nhọrọ ọzụzụ gị.
Kwụpụ 1. Họrọ Isiokwu Ọzụzụ Gị
Biko họrọ isiokwu ọzụzụ ị nwere mmasị na ya. Can nwere ike ịlele ọtụtụ ndị ịchọrọ ma ị nwere ike ịhọrọ isiokwu sitere na ọtụtụ otu (Ndị Ọrụ niile, Ndị otu na ndị njikwa).
Ajụjụ kachasị mkpa ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ isiokwu (s) ọzụzụ gị bụ 'gịnị ka ịchọrọ ka ọzụzụ ahụ nweta?' Onye ọ bụla n’ime modul anyị a bụ oge elekere 1 wee rụpụta ya n’ọtụtụ usoro mmụta ga-enyere ndị gị aka ime ka mmụta ha gaa n’ihu ọzụzụ n’onwe ya. Anyị na-akwado ịmalite site na isi modulu anyị ma jiri aka gị wuo ngwa ọrụ ọzụzụ gị.
Iji họrọ ọzụzụ ị nwere mmasị na ya, mepee menu nke modulu site na ịpị akara + wee pịa akara + ọzọ iji mepee ozi ndị ọzọ gbasara usoro ahụ wee lelee igbe ọzụzụ ahọrọ. Nwere ike ịhọrọ ma jikọta n'akụkụ atọ niile dabere na mkpa gị.
Ozugbo ị họrọla nhọrọ gị, ndị a ga-eri nri na-akpaghị aka na ala nke ibe ahụ ozugbo ị juputara na nkọwa gị ma nyefee ụdị gị, onye na-enye anyị ọzụzụ ga-amata ụdị modulu ịchọrọ
Ndị ọrụ niile (0 isiokwu nkuzi ahọpụtara)
Okwu mmalite maka ahụike na ahụike (Usoro modulu maka ndị ọrụ niile)
Ndi sonyere uche n’ahu banyere nsogbu uche nke uche ha ma mee ka ha mata uzo ise ha kwesiri ka ha mee onwe ha.
Ghọta na Mbelata Nchegbu
Ndị sonyere na -amụta otu esi ahụ ọkọlọtọ ha na-acha uhie uhie maka nrụgide na-azaghachi ọnọdụ dị iche iche wee mata ụfọdụ 'usoro' ịnagide usoro.
Chọpụta ihe ịrịba ama na mgbaàmà nke nsogbu ahụike ọgụgụ isi
E webatara ndị sonyere na ihe ịrịba ama na mgbaàmà nke ọtụtụ nsogbu ahụ ike ọgụgụ isi na iwepụta ụfọdụ ndụ ahụmahụ ikpe ọmụmụ.
Ihe ịma aka ahụike uche
Ndị sonyere na-enyocha mmetụta nke ihere ahụike nke ọgụgụ isi na otu esi eme obere usoro iji na-eme ihere na ịkpa oke.
Ikwu okwu banyere igbu onwe
Ndị so na ya ghọtara mkpa ọ dị ikwu maka igbu onwe ha na otu 'obere okwu nwere ike isi chebe ndụ' yana ebe ha ga-esi nweta nkwado maka onwe ha na ndị ọzọ.
Na-agagharị na ịza mgbanwe
Ndị sonyere na-enyocha mmekọrịta ha na mmeghachi omume iji gbanwee ma na-eme ụfọdụ usoro dị ike maka ịnagide gburugburu VUCA.
Zụlite àgwà iche echiche siri ike
Ndị so na ya ghọtara njikọta nke echiche anyị, mmetụta na omume anyị wee mụta otu esi eweghasị echiche na-enweghị isi.
Na-egosipụta ọmịiko onwe onye
Ndi sonyere na ya mutara idi-nma nke onwe-ya na idi nkpa ibu enyi na onye obi uto gi n’oge nsogbu.
Mepụta na ịnọgide na-enwe ezigbo ahụ ike
Ndị sonyere na-aghọta sayensị dị n’azụ omume na -emepụta ma chọpụta otu esi etinye ngwaọrụ na usoro ọma na usoro na-aga n’ihu.
Stkwalite obi ike na ùgwù onwe onye
Ndị sonyere ghọtara ebe ntụkwasị obi na-esite na ụfọdụ ụzọ dị mfe iji bulie ntụkwasị obi ma bulie onwe gị elu.
Eme usoro itinye uche
A na-ewebata ndị sonyere na usoro ọgụgụ isi dị mfe ma jiri ya na-akwalite izu ike.
Iwuli ụlọ site na obere mmeri
Ndị so na ya ghọtara ike ị na-eme 'obere mmeri' maka iwuli ụlọ na mkpa ọ dị ịbụ onye isi mmụọ gị.
Iguzozi ike ma na-ebute ụzọ izu ike
E webatara ndị sonyere na fone ahụ ike gwụrụ na akpịrịkpa ume wee chọpụta ụzọ ha ga-esi zuru ike ma zuo ike.
Zụlite àgwà ihi ụra dị mma
Ndị so na ya ghọtara sayensị dị n’azụ ụra na otu anyị nwere ike isi zụlite omume ihi ụra dị mma iji meziwanye ụra anyị na ogo anyị.
ìgwè (0 isiokwu nkuzi ahọpụtara)
Ndị otu ahụike siri ike (Isi Module maka otu)
E webatara ndị sonyere n'usoro mmepe otu Tuckman (na-akpụ, na-eme ihe ike, na -eme ihe, na -eme) ma na-enyocha njirimara nke otu ahụike ahụike.
Ghọta esemokwu na otu
E webatara ndị sonyere na Instrument nke TKI nke esemokwu esemokwu dị ka ngwa ọrụ iji ghọta mmeghachi omume ha sitere n'ọgụ na otu esi agbanwe usoro ha n'ime otu.
Na-emeri esemokwu na otu
E webatara ndị sonyere na 3 Rs nke esemokwu na ọtụtụ ngwaọrụ na usoro iji nyere aka dozie ọnọdụ metụtara esemokwu.
Ndị sonyere ghọtara mkpa ọ dị ige ntị na-arụsi ọrụ ike na otu ma wepụta site n'ọtụtụ ọnọdụ iji zụlite nka ige ntị.
Zụlite Wellness Action Plan (WAP)
Ndị sonyere ghọtara uru ịzụlite (Wellness Action Plan) iji kwado ahụike ọgụgụ isi ha na ahụike ha na-arụ ọrụ.
Zụlite Otu Ọdịmma Otu Atụmatụ Atụmatụ (WAP)
Ndị sonyere ya mepụtara otu otu Usoro Ọdịmma Nlekọta iji kwado ahụike ahụike na ahụike nke otu ahụ na-aga n'ihu.
Managers (0 isiokwu nkuzi ahọpụtara)
Rolechọgharị ọrụ njikwa njikwa (Isi Module maka Ndị njikwa)
Ndị na - ahụ maka ahịrị ihe na - ewepụta myirịta na ọdịiche dị n'etiti ọrụ ha tupu, n'oge na post Covid-19 ma chọpụta nkwado nke nkwado.
Isetịpụ oke na ibute ụzọ ilekọta onwe gị anya
Ndị na-ahụ maka ahịrị n'ahịrị ghọtara mkpa ọ dị ịtọlite ​​na itinye n'ọrụ ókèala doro anya yana otu esi elebara ọdịmma nke onwe ha anya dị ka njikwa.
Iji Wellness Action Plans (WAPs) iji kwado mkparịta ụka gbasara ahụike na ahụike
Ndị njikwa Line na-enyocha uru nke Wellness Action Plans (WAPs) dị ka ngwa ọrụ iji kwado ndị otu iji jikwaa ọdịmma ha n'ọrụ.
Ijikwa nlọghachi ọrụ
Ndị na-ahụ maka ahịrị ihe na - ewepụta ihe metụtara ijikwa laghachi n ’ọrụ ọrụ ma kpaa ụfọdụ ndapụta nke mmadụ.
Ijikwa mkparịta ụka siri ike
Ndị na-ahụ maka ahịrị akara na-amụta ngwa ọrụ na usoro iji kwado mkparịta ụka siri ike ma nwee ohere ịme ihe ngosi akọwapụtara nke ọma.
Na-eme mgbanwe maka mgbanwe na-aga n'ihu
Ndị na-ahụ maka ahịrị ndị na-arụ ọrụ n’ahịrị na-atụle etu ha ga-esi meghachi omume na ọnọdụ mgbanwe na-aga n’ihu na atụmatụ atụmatụ iji kwado nkwado na-aga n’ihu.
Biko hota opekata mpe otu ọzụzụ.
Kwụpụ 2. Họrọ ụzọ nnyefe gị
N'oge oria a na-efe Covid-19, anyị emeela ngwa ngwa iji dozie ihu anyị niile ka anyị nwee ike ịnagide ọzụzụ na ntanetị, yabụ ugbu a anyị nwere ike ịnye oge anyị niile site na Mbugharị ma ọ bụ ebe ọzụzụ na -eche nche nke ị họọrọ.
A na-enyefe ọzụzụ ihu na ihu na ọkara ụbọchị (3 modul) ma ọ bụ ụbọchị zuru ezu (6 modul).
A na-enyefe ọzụzụ n'ịntanetị site na usoro usoro ihe omumu kwa izu, site na nhọrọ 3, 6, 9 ma ọ bụ 12 x 1 elekere. Biko dị njikere ị budata Mbugharị na kọmputa gị ma debe akaụntụ tupu ọzụzụ gị.
Online (site na mbugharị)
Biko họrọ usoro nnyefe.
Kwụpụ 3. Zitere anyị ihe ndị ị họọrọ
Selected họrọla 0 isiokwu ọzụzụ (s) napụta .
0 All ọzụzụ ndị ọrụ (s)
0 Otu ọzụzụ otu (s)
0 Isi okwu njikwa (s)
Biko tinye nkọwa kọntaktị gị n'okpuru wee pịa Ziga iji zitere anyị nhọrọ gị ma anyị ga-enwe mmekọrịta.
Biko họrọ ma ọ dịkarịa ala otu isiokwu ọzụzụ site na Nzọụkwụ 1.
Biko họrọ opekata mpe otu ọzụzụ site na nzọụkwụ 1 dị n'elu.